Malunga nathi -Yantai Bondhot Health Technology Co., Ltd.
Yantai Bondhot Health Technology Co., Ltd. ise kwikomkhulu China yegolide - Zhaoyuan, kwiPhondo Shandong, isixeko ubuhle kunye zokuhamba lula. Yasekwa ngonyaka ka-2012, indawo yemveliso yenkampani ibandakanya i-27,000 yeemitha zesikwere. Kukho abasebenzi abangaphezulu kwama-200 kule nkampani kunye nemveliso yokusebenzela esemgangathweni, uphando oluphezulu kunye neziko lovavanyo lophuhliso, indawo yokugcina yobungcali kunye nokwakhiwa kweeofisi zale mihla kunye nezipheleleyo ezinotyalo-mali olupheleleyo lwe-Yuan engaphezu kwezigidi ezingama-50. Inkampani ibandakanyeka ikakhulu kuphando lwenzululwazi kunye netekhnoloji kunye nophuhliso kunye nokunyusa iimveliso zococeko.
Inkampani ibambelela kumgaqo "wezococeko, intuthuzelo kunye nolwaneliseko". Inkqubela phambili yala maxesha yenkonzo iye yaziswa kwaye inkqubo ye-CIS iziswe ngokubanzi, ethi yamkele imo yolawulo lwebrand ejikelezayo ihlanganisa i-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo kunye nokwazisa eyona mveliso iphambili yokuhamba ngesantya esiphezulu semveliso kunye neendlela zolawulo ukuqinisekisa ukuba imveliso kunye nemveliso ekumgangatho ophezulu.
Uyilo olwahlukileyo, olukumgangatho ophezulu kunye nenkonzo egqwesileyo kukusukela okungapheliyo kwenkampani.
Inkampani ye-Gigico brand pet diapers yenziwe ngamalaphu akumgangatho ophezulu angalukanga, avumela ukungena ngokukhawuleza kunye nokufunxa; Izinto zepolymer ezifunxa kakhulu zongezwe kulwahlulo lwangaphakathi lunokutshixa amanzi; umaleko wangaphandle usebenzisa i-membrane engenamanzi ye-PE ekumgangatho oguqukayo kwaye akukho lula ukukrwitshwa zizilwanyana zasekhaya; iveliswa ngumatshini wendibano ye-servo oluzenzekelayo ngokupheleleyo kunye nemveliso yemihla ngemihla ukuya kuthi ga kwiziqwenga ezingama-500,000.
Inkunkuma yekati yohlobo lweGigico eveliswe kwinkampani yethu ayinazo izongezo kunye neekhemikhali, amandla anamandla ekufunxweni kwamanzi kunye nokususa deodorization, akukho ungcoliseko lothuli kunye nokugweba impilo yezilwanyana zasekhaya ngombala.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ngokuxhomekeka kumgangatho wemveliso ezinzileyo kunye neenkonzo zenkqubo yobuchwephesha, inkampani iseke ubudlelwane bexesha elide kunye nozinzo lwentsebenziswano namaqabane amaninzi e-China nakwabo baseJapan, eYurophu nase-United States, e-Asia nase I-Afrika, njl., Ebeke ilitye lembombo lokuhlangabezana neemfuno zabathengi basekhaya nakwamanye amazwe ngokukuko nangokulula kunye nokwandisa ukhuphiswano lwamazwe ngamazwe.
Yantai Bondhot Health Technology Co., Ltd. yamkela abahlobo abavela kuzo zonke iinkalo zobomi ukuba beze kutyelela, banike imiyalelo kwaye babe nothethathethwano loshishino.
-Yantai Bondhot yeTekhnoloji yezeMpilo Co, Ltd.